Desambra: volana mampiroborobo ny kabary | NewsMada
Desambra: volana mampiroborobo ny kabary
Samy mahazo ny anjarany ! Mpihira, mpitendry zavamaneno, mpiantsa, sns, ilaina tokoa amin’ny vanim-potoana tahaka izao. Fa anisan’ny miavaka ihany koa ny an’ny mpikabary, satria saika isan’andro, mikabary hatrany…
Faran’ny taona, vanim-potoana ifalian’ny ankohonana, ny fianakaviana, ny mpiara-monina, ny isam-pirenena mihitsy. Maro ireo hetsika kolontsaina sy zavakanto azo enti-manamarika izany. Iray amin’ireny ny kabary. « Niova tsy tahaka ny teo aloha intsony ny fotoana hikabariana rehefa volana desambra. Tsy mifidy andro fa na alatsinainy na talata na alarobia, sns, saika mandeha hatrany ny mpikabary. Ny mariazy sy ny fanateram-bodiondry no tena mitombo isa be, isaky ny volana desambra tahaka izao », hoy Andriamboavonjy Hanitra, filohan’ny foiben’ny Fikamban’ny mpikabary malagasy maneran-tany (Fimpima maneran-tany).
Efa zary tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny fianakaviana malagasy (na ny vahiny manam-bady teratany malagasy ihany koa) ny maka mpikabary amin’ny mariazy sy ny fisoratam-panambadiana, indrindra fa ny fanateram-bodiondry. Manomboka miverina tsikelikely ny toeran’ny kabary any anivon’ny fianakaviana sy ny fiarahamonina.